Doomo si sharci darro ah u kalluumeysanayay oo laga qabtay Xeebaha Soomaaliya - Awdinle Online
Doomo si sharci darro ah u kalluumeysanayay oo laga qabtay Xeebaha Soomaaliya
Ciidamada Badda Dowlad goboleedka Puntland ee loo soo gaabiyo PMBF ayaa howlgal ay ka sameeyeen xeebaha degaano ka tirsan gobolka Bari waxaa la sheegay inay ku qabteen Doomo dhowr ah oo si sharci darro ah ku kalluumeysanayay.
War kasoo baxay Taliska Ciidamada Badda Puntland ee PMBF ayaa waxaa lagu sheegay in howlgallada sigaar ah looga fuliyay Xeebaha degaannada kala ah Tooxin, Baargaal, Gunbax, Xaafuun iyo Foocaar ee Gobolka Bari laguna soo qabtay Doonyo dhawr ah oo sifo sharcidaro ah uga kalluumaysanaayey.
” la-dagaalanka kalluumeysiga sharci dararda ah, Burcad Badeeda iyo Mukhaadaraadka ayaa sal u ahaa howlgalkaasi waxaay Ciidamadu gacanta ku dhigeen Doonyo dhawr ah oo sifo sharcidaro ah uga kalluumaysanaayey degaannada kor ku xusan ayaa lagu yiri” warka kasoo baxay Ciidamada PMBF.
Sidoo kale Ciidamada Badda Puntland waxaa ay sheegeen in heegan loo geliyay dhamaan Ciidamada dadaalada lagu sugayo amniga & xasiloonida dhamaan xeebadaha iyo degaannada Puntland.
Saraakiisha Ciidamada Badda Puntland faah faahin kama bixin tirada doomaha ay qabteen iyo dadkii saarna, hayeeshee dhowr jeer ayaa Ciidamada badda Puntland waxaa ay qabteen Doomo si sharci darro ah u kalluumeysanayay.
Previous articleGuddoomiyaha Gobolka Hiiraan oo safar deg deg ah ku tegay Buulo-Burde
Next articleMaxkamadda Ciidamada Qalabka sida oo xukun dil ah riday